Zvine musoro here kutanga ecommerce web page ye Amazon vatengesi?
Vakawanda vevatengesi vekutsvaga, kunyanya avo vanoita bhizinesi duku, vanoshandisa Amazon kutengesa mbatya senzvimbo imwe chete yemakisi ekugovera. Kutanga bhizinesi paAmazambique hazvidi nguva uye mari yezviwanikwa. Chinhu chose chaunoda ndechokuti uwane chigadzirwa chaungada kutengesa, chinyora icho chakutengesa, uchitumire kuAmazon, uye ivo vanoita zvose zvakasara kwauri - buy real drivers license. Uyezve, Amazon ndiyo imwe yenzvimbo huru dzekutengeserana pawebhu apo vazhinji vevashandisi vanotanga uye vanomira ruzivo rwekutenga. Zvinoreva kuti haufaniri kukwevera vashandisi kubva pakutsvaga kune bhizimisi rako reEcommerce. Vachawana vashandi venyu nekusakanganisika nokuti vanoona Amazon semutauro wepamusoro unotaridzika unogona kuvabatsira. Ndiko kusaka vatengesi vekuIndaneti vanogona kuvaka matanho matanhatu neanomwe mabhizinesi ekuisa pfungwa dzavo dzose kuAmazon.
Zvisinei, zvichienderana nezvinangwa zvebhizimisi rako, Amazon inogona kugutsa zvido zvako kana kudzivisa kushambadzira kwekutsvaga kwako. Ndicho chikonzero nei zvine musoro kufunga nezvekunze kweAmerican business strategy.
Ngatishandurei kuhuwandu hwemashamba. Sezvo nhamba dzegore rapfuura dzinoratidza, huwandu hwakawanda hwekutengeserana kwebhizimisi yeB2C waiva $ 393 bhiriyoni. 55% yemari yose yakagadzirwa nezvivako zvakasikwa, uye pasi pe45% yekubatsirwa kwese kwakawanikwa kuburikidza nemisika. Kuparara kweiyo 45% pamisika kunoratidza kuti 36% yehuwandu yakaitwa kuAmazon, 8% paBay uye 1% chete pane dzimwe nzvimbo dzekutengesa.
Iyi nhamba inoratidza kuti iwe wakarurama nechisarudzo chekutengesa zvinhu zvako kuAmazon. Uyezve, inogona kuva pfungwa yakanaka yekuenda neAmazon neBay. Zvisinei, hachiri mukana wakaisvonaka wekuwedzera marashi yako pawebhu..Zvisinei, kutanga webhusa rekutsvaga kunogona kukubatsira kukura mararamiro ako pawebhu uye kukurudzira kutengesa kwete Amazon chete.
Regai tikurukure kuti mabhidhiyo emabhandi anogona sei kuvandudza peji rako rekutengesa Amazon uye zvipi zvaunogona kuwana kubva kwazviri.
Kubatsirwa kwekutanga mabhizinesi ewebhu
Wedzera kunze kweAmazambique nokuda kwechiratidzo chechigadzirwa
Fungidzira mamiriro ako vanogona kutenga vatengi vari kutarisa pane zvamakagadzirwa mu Amazon. Anowana peji yako yezvigadzirwa asi anoda kuwana ruzivo rwakanyanya pamusoro pekodhi yako nezvimwe zvinhu zvaunotengesa. Zvichida nzvimbo yekutanga yaachazotarisa ndiyo yako yebindu redu redu. Muchiitiko ichi, webhusaiti yako ichashanda sechinhu chisimbiso pakarepo. Icharatidza chiziviso chako chekodhi uye bhizimisi chekuita. Zvichida webhupu yako haisi yekutengesa ecommerce retail operation; iyo ndiyo nyanzvi inobva pakuratidza kwako kwechiratidzo. Inoshanda senzvimbo iyo iwe ungogovera nhau yako yekodha, kuwedzera pane zvigadzirwa zvemugadziri uye kupa ruzivo rwakakodzera rwekutsvaga. Itaiti webhupu yekutengesa INOFANIRA kana iwe ukatengesa zvinhu zvinokosha uye zvinodhura zvakadai sezvishongo, zvemagetsi, etc.
Wedzera kunze kweAma Amazon nokuda kweBrand Registry
Chimwe chikonzero chinokosha kuumba yako branded web store ndiyo mano ekushandisa marashi yako kuAmazbek Brand Registry. Kana chikwama chako chikaiswa mubhuku rekunyora, unogamuchira mukana wekugadzirisa peji peji peji. Zvinoreva kuti zvimwe zvekutengesa hazvigoni kuchinja mazita ako nokuti iwe uri mumwe chete wezvokwadi zvechigadzirwa chako.
Sekugadzirwa kwemavara iwe unogona kuzarura kune vamwe vatengesi vekutsvaga nekugovana nemifananidzo, kuvandudza muedzo wako kana kuchinja tsanangudzo yako.